Akụkọ Google kachasị ọhụrụ na gam akporo na-akwado nnabata nke gam akporo 2.2 Froyo | Akụkọ akụrụngwa
Akụkọ Google kachasị ọhụrụ na gam akporo na-akwado nkwụsị nke gam akporo 2.2 Froyo
Na mmalite nke Jenụwarị Google ebipụtaghachilarịrị ihe ọ na-eme Akụkọ gam akporo, nke enwere ike inweta ozi abuo. Nke mbụ n'ime ha bụ nhụsịrị nke gam akporo 2.2 Froyo, mgbe ogologo mgbu gasịrị, yana ngwa ngwa iwepụ gam akporo Nougat, nke dị ka ụdị ọ bụla nke gam akporo ọ bụla dakwasịrị ahịa, na-ewere ọtụtụ ịmalite.
Dị ka akụkọ ọ bụla, Google enyela anyị a kapịrị ọnụ data nke ọ bụla nke gam akporo nsụgharị na ahịa, na anyị na-egosi gị naanị n'okpuru;
Ọ na-etolite obere uto nke gam akporo Nougat nwetara, nke na-esite na 0.4% ruo 0.7%, na nke niile ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile tụrụ anya ihe ọzọ. Android Marshmallow enweelarị òkè ahịa 29.6%, site na 26.3%. Na mkpokọta, ụwa gam akporo ka na-adị otu, yana oke oke ahịa nke nsụgharị ndị dị n'ahịa ruo oge ụfọdụ, ebe ndị ọhụụ nọ na klaasị dị ka Nougat ka na-anwa iwepụ.
Kedu ụdị gam akporo ị na-eji na ekwentị mkpanaaka gị ma ọ bụ mbadamba?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Akụkọ Google kachasị ọhụrụ na gam akporo na-akwado nkwụsị nke gam akporo 2.2 Froyo
Fraịdee na-abịa anyị ga-ezute Nintendo Switch na ndị a bụ egwuregwu ndị ekwenyelarị
ASUS Zenfone 3 emelitere na gam akporo 7.0